I-SDL: Yabelana ngeMiyalezo eManyeneyo naBathengi baKho behlabathi | Martech Zone
Namhlanje, abathengisi abakhangela eyona ndlela ikhawulezayo kunye neyona ilumkileyo yokulawula amava abathengi bajika iintloko zabo kwilifu. Oku kuvumela yonke idatha yabathengi ukuba ingene kwaye iphume kwiinkqubo zentengiso ngaphandle komthungo. Ikwathetha ukuba iiprofayili zabathengi zihlala zihlaziya kwaye iiseti zedatha yabathengi zenziwa ngokuzenzekelayo ngexesha lokwenyani, zibonelela ngombono odityaniswe ngokupheleleyo wokunxibelelana kwabathengi kwishishini lophawu.
I-SDL, abenzi be Amava abaThengi (CXC), Abathengisi abalawula amava abo kumthengi kwilifu abanakho kuphela ukulawula amaphulo, kodwa nokwenza ukujikeleza okuqhubekayo okufikelela kumthengi ngokwemiqathango yabo. Makhe sijonge ukuba isebenza njani le nto:
Kule vidiyo ingentla, ufunda ukuba i-SDL CXC ihambisa ngaphandle komthungo, amava aqhutywa yidatha kwindawo nganye yohambo lwabathengi-kuwo onke amajelo, izixhobo kunye neelwimi. Kwiplatifomu enye esekwe kwi-SaaS, i-CXC ibonelela ngolawulo lwamashishini oludibeneyo lokuqala (CX) olubandakanya indawo yentlalo, umxholo wewebhu, umkhankaso, i-e-commerce kubahlalutyi kunye nezixhobo zolawulo lwamaxwebhu. I-CXC ikwadibanisa neLifu leLwimi le-SDL ukuze iimveliso zonyuse amathuba abo okunxibelelana nabathengi kulwimi nakwinkcubeko yabo.
Amava eSDL aMava abaThengi (i-CXC) liqonga lobuchwephesha elidityanisiweyo elenza ukuba iinkampani zikwazi ukuhambisa amava angenamava, aqhutywa yidatha kubathengi kuyo yonke indawo yohambo lokuthenga- kuwo onke amajelo, izixhobo kunye neelwimi. Ngama-72 kweempawu ezili-100 zehlabathi jikelele ezisebenzisa itekhnoloji ye-SDL ukubonelela ngamava aphezulu kubathengi.
Inkqubo yeqonga elinye le-SDL inika abathengisi umbono omanyeneyo wonxibelelwano lwabathengi babo. Ukusuka kwindawo enye uphawu lunokubona ukusebenza kweendlela zalo kwaye lwenze uhlengahlengiso oluhambelanayo kulo lonke unxibelelwano lwabathengi, okanye luthathe indlela eyimbumbulu xa kufuneka njalo.
Nanku umzekelo womsebenzisi we-CXC:
I-SDL CXC ithembisa indlela ekhawulezayo nelula yokuba abathengisi banxibelelane nabathengi babo kwaye ibaxhobise:
Yenza ingxoxo ngeencoko zabathengi Ngokuqokelela idatha yomthengi kwindawo nganye yokuthintela ukuze wazise ngokuthe ngqo ukuthengisa kunye nezigqibo zemveliso
Hambisa imikhankaso ekrelekrele yedijithali ngokudibanisa kubahlalutyi kunye nokujolisa ekusebenzisaneni nephulo kubathengi banamhlanje
Amandla amava afanelekileyo ngokuhlalutya iinkangeleko kunye nokuziphatha ngexesha lokwenyani ukwenza ukuhanjiswa kwemeko esekwe kwisixhobo, ixesha losuku, indawo, ulwimi, imbali yabathengi kunye nokunye
Umthengi we-SDL, Schneider Electric, Ingcali kulawulo lwamandla ifumanise ukuba iqonga elinye kunye nendlela esekwe kwilifu yenza ukuba ukufezekisa iinjongo zabo zokubonelela ngamava abathengi kunye kunye nokungenamthungo kube lula kakhulu. Inkampani yahlukile kumazwe angaphezu kwe-100 kunye neeyunithi zeshishini ezininzi. Bajongane nomceli mngeni oqhelekileyo kwilizwe liphela, kwimveliso zorhwebo: Ingenza njani inkampani ekuhanjisweni, kwimveliso eyahlukeneyo kunye nesisombululo, esisebenza kwihlabathi liphela, ihambise into efanelekileyo, engaguquguqukiyo kwaye ekhawulezayo kubo bonke abathengi nakwindawo abasebenza kuzo?
Ukuhlangabezana nale mfuno, bafuna isisombululo esisekwe kwiwebhu esiya kuthi sibeke kwisicwangciso sabo sentengiso yedijithali, siyilungelelanise namava abathengi bayo kwidijithali kwaye ivumele inqanaba elifanelekileyo lokuguquguquka ukuze lihlengahlengise iimfuno zabathengi balapha. I-SDL ibonelele kanye ngaloo nto.
Sinomdla wokuqhubeka ngokuguqula amava ethu ewebhu kubathengi bethu kunye nokudibana neemfuno zabo ezihlala zitshintsha. Siyakholelwa ukuba i-SDL ibekwe kakuhle ukusinceda ukuba siguqule iwebhusayithi yethu ibe ngamava awenzelwe umntu ngokupheleleyo, siphendule iimfuno ezithile zomthengi ngamnye. Xa sihambisa eli nqanaba lokufaneleka kubathengi bethu kwi-intanethi, bafumana iimpendulo ezikhawulezayo kwiimfuno zabo, ukunyaniseka kwegama labo kuyanda kunye ne-ecosystem yethu iphumelele. UShawn Burns, USekela Mongameli oMkhulu weWebhu kunye neNtengiso yeDijithali eSchneider Electric
Funda ngakumbi malunga nendlela USchneider Electric usebenzisa i-SDL CXC, Cofa apha. Funda ngakumbi malunga Amava eSDL aMthengi.
tags: ijelo elinqamlezileyoisixhobo esinqamlezileyoulwimi oluxubeneyoiiseti zedatha yabathengiilifu lamava omthengiUlawulo lwamava abathengiukusebenzisana kwabathengiumjikelo wentsebenzo yomthengiukusebenzisana kwabathengicxcx ulawulojikeleleumyalezo wehlabathiehambelana kakhuluamava omthengi adityanisiweyoindibaniselwano yolawulo lwamava abathengiamaphulo akrelekrele edijithaliumjikelo wentsebenzongamazweimiyalezo yamanye amazweIxesha elilungileii-saasSchneider ElectricsdlI-sdl cxcilifu lolwimi sdlUShawn Burns
I-Leanplum: Uvavanyo lwe-A / B kuMxholo wakho weFowuni kunye neMiyalezo
Iingcebiso ezi-5 zokuGuqula ngempumelelo iThemba lakho kwi-Intanethi libe kwiKlayenti